ARAG SAWIRRADA: Siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan oo Kulan Xasaasi ah la yeeshay Axmed Madoobe! | HalQaran.com
Home Wararka Maanta ARAG SAWIRRADA: Siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan oo Kulan Xasaasi ah la yeeshay...
Siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan oo maanta Axmed Madoobe la kulmay.
Kismaayo (Halqaran.com) – Siyaasiyiinta Magaalada Kismaayo kaga qaybgalay xafladdii caleemo saarka ee Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam (Axmed Madoobe) ayaa Isniintii maanta magaaladaasi kula kulmay Hoggaamiyaha Jubbaland.
Madaxweynaha Jubbaland oo horey siyaasiyiintaasi ugu soo casuumay in ay ka soo qaybgalaan xafladiisa caleemo saarka ayaa maanta markale ku casuumay in ay yimaadaan duleedka Magaalada Kismaayo.
Martiqaadkii maanta ayaa ahaa mid ay ku damaashadayeen siyaasiyiintaasi, loogamana hadlin wax siyaasad ah.
Dhinacyada lagu martiqaaday duleedka Kismaayo ayaa waxaa ka mid ah Madaxweynaha Puntland, Siciid Cabdullaahi Deni, Guddoomiye kuxigeenka 1aad ee Aqalka sare ee Baarlamaanka Somaliya, Abshir Maxamed Axmed (Abshir Bukhaari), Madaxweyne-yaashii hore ee Somaliya, Shariif Shariif Axmed & Xasan Sheekh Maxamuud, Madaxweyne-yaashii hore ee Koonfur Galbeed iyo Galmudug, Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo C/kariin Xuseen Guuleed, Hoggaamiyaha Xisbiga Wadajir, C/raxmaan C/shakuur Warsame iyo Xildhibaano Labada Aqal ee Baarlamaanka Somaliya ka tirsan.
Madaxweynaha Jubbaland, Axmed Madoobe, Madaxweynaha Jubbaland ayaa dhinacyadaasi kaga mahadceliyay sida wanaagsan ee ay kaga soo jawaabeen martiqaadkii uu u sameeyay, ee ahaa in ay ka soo qaybgalaan caleemo saarkiisa.
Axmed Madoobe oo xaalka uu ku xumaa ayay dhinacyadaan oo saluugsan siyaasadda Villa Somaliya ay is garab taaggeen, waxayna u muuqdaan kuwo ay mideysay khilaafka Jubbaland iyo dowladda.
Ugu dambeyn, Villa Soomaaliya ayaa horey u diiday in ay aqoonsato tallaabada marka labaad lagu soo doortay Axmed Madoobe, waxayna taasi bedelkeeda soo jeeday in doorasho ku celis ah la qabto.
Siyaasiyiinta Kismaayo ku sugan